Jabulela uhambo lwakho nabathandekayo bakho, Mane ubize - + 91-993.702-7574 nencwadi ethi Odisha Chhattisgarh Tribal Tour
Ukuphila kobuhlanga kukhona into ejabulisa ngaso sonke isikhathi umuntu wesimanje. I-Sand Pebbles 'I-Odisha Chhattisgarh Tribal Tour izokuvumela ukuba uhlolisise izinhlanga ezahlukene zika-Odisha noKhahattisgarh namaphakheji akhethekile. Izizwe ezindala kunazo zonke zika-Odisha ne-Chhattisgarh ziyi-Dunguria Kondh Tribes, i-Bonda Tribes enemibalabala kanye neGadiaba, uMaria noMaria Tribes, amaGond Tribes asehlala emagqumeni aphezulu futhi agcine amasiko abo namasiko abo kuze kube namuhla. I-Odisha Chhattisgarh Tribal Tour izokuvumela ukuba uhlangane nesisekelo sezinhlanga ezahlukene. I-plethora yezindawo ezimangalisayo lapha ihlala ingakaze ihlolwe ukuthi inikeza ulwazi olujabulisayo. Izizwe e-Odisha ne-Chhattisgarh zithatha isikhundla esiyingqayizivele ebalazweni lase-India e-Ethnographic ukuze zibe nemiphakathi emikhulu kunazo zonke. Ngesikhwama sethu esikhethekile se-Odisha Chhattisgarh Tribal Tour singathola amasiko, amasiko, ama-ethnic cuisine kanye nemisebenzi yezandla. I-Odisha Chhattisgarh Tribal Tour ikumema ukuba ubone impilo emangalisayo ye-India.
Uhlelo lwe-06 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 212
DAY 01: ARRIVAL VISAKHAPATNAM - JEYPORE
Lapho efika eVisakhapatnam isiteshi sezindiza e-Jeypore endleleni ehambela abantu abambalwa amadolobha, Ithempeli laseJagannath eKoraput Town kanye nokuvakashelwa kusihlwa edolobheni laseJeypore. Ngobusuku e-Jeypore.
DAY 02: JEYPORE - ONUKUDELLI - JAGDALPUR
Kusasa ngemuva kokuvakasha kwasekuseni ku-Onukudelli ukuvakashela isizwe esiphezulu kunazo zonke okuthiwa uBonda, Gadaba & Didayee emakethe yamasonto onke. Bese uvakashela amancane amadolobha aseGadaba bese usuka eJagdalpur. Ngobusuku kuJagdalpur.
USUKU LWE-03: I-JAGDALPUR - I-KANGER VALLEY NATIONAL PARK & TIRATHGARH WATERFALL - AMANZI AMAKHAKHOTI - JAGDALPUR
Ngemuva kokuhambela kwasekuseni eKanger Valley National Park naseTrathgarh Waterfall. Khona-ke ukuhambela kwentambama yeKitrakoot amanzi (i-Niagara Waterfall). Ngobusuku kuJagdalpur.
DAY 04: JAGDALPUR - KONDAGAON - KANKER
Ngemuva kokudla kwasekuseni uhambe eKanker uvakashele iKondagaon (odumile ngokukhipha ama-dhokra) ne-Kideichapra (edume ngedolobhana lensimbi). Ngobusuku eKanker.
Ngemuva kokudla kwasekuseni, ujabulele ukuvakashelwa usuku lonke ukuvakashela umuzi waseBahaigaon, odume ngabadlali bawo. Izindawo ezisemaphandleni ezungeze iKanker yinkinga engapheli yokuthola okuthakazelisayo. Ukuvakashela amaGond Muria kanye neGond Halva nemizi yezwe kungaba yinto ejabulisayo kuwe. Kusihlwa, sibuyela eKanker. Ukuhlala ebusuku kuzoba seKanker Palace.
DAY 06: KANKER - RAIPUR
Ngemuva kokudla kwasekuseni kuRaipur ukuvakashela izindawo ezimbalwa endleleni. Bese uchitha isikhathi esithile ethempelini laseChamparan naseRajim Lochan. Bese uhlole ehhotela futhi ubusuku bonke eRaipur.
DAY 07: RAIPUR AIRPORT DROP
Ngemuva kokudla kwasekuseni ukuya eRaipur isiteleka sezindiza.